Kyaw Thu – Shwedagon Pagoda | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← treasure of my life, poems from my heart – 20	Maung Lwan Ni – Sugar coated troubles (11) →	Kyaw Thu – Shwedagon Pagoda	05
လေးဆူဓာတ်ပုံ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ကျွန်တော် မဖူးမြော်ရသည်မှာ လေးနှစ်တာ ကာလအတွင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးသောကာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမတိုင်မီ အချိန်များတွင် ကျွန်တော်သည် တပါတ်လျှင် တကြိမ်အနည်းဆုံး ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး၏ ရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့အပြင် တက်ရောက်ကြည်ညို ဖူးမြော်ခွင့်ရခဲလှသော ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ အထွဋ်အထိပ်တွင် တည်ရှိနေသော စိန်ဖူးတော်ကြီးအားလည်း ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်၏သား ပြည်သိမ်းကျော်တို့ တက်ရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ဖူးပါသည်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးသည် မြန်မာပြည်သူလူထုတင်မက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ဘာသာခြားများနှင့်ပါ မစိမ်းပါ။ လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး လွတ်လပ်စွာတက်ရောက် ဖူးမြော်ခွင့်ရရှိသည့် တန်ခိုးကြီးမားလှသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာနွယ်ဝင်တို့၏ အထွဋ်အမြတ်ထား ကိုးကွယ်ရာတည်း ဟူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ဆံတော်များကိန်းဝပ်ရာ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ နောက်ပိုင်းတွင် လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတို့၏ နာရေး၊ ဆေးကူညီမှု၊ ပညာရေး ကဏ္ဍများအား (အခမဲ့) ဖေးမကူညီပေးနေသော ကျွန်တော် တက်ရောက်ဖူးမြော်ရာတွင် လွတ်လပ်မှုများ ဆုံးရှုံးခဲ့တော့သည်။
ကျွန်တော်သည် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား တက်ရောက်ဖူးမြော်မည်ဆိုပါက အာဇာနည်ကုန်း မြောက်ဘက်မုဒ်မှ ဓာတ်လှေခါးနှင့်တက်ကာ ရင်ပြင်ပေါ်ရောက်သည်နှင့် မေတ္တာပို့သမှုကို မြောက်ဘက်မုဒ်တွင်ရှိသော ဝိဇ္ဇာတန်ဆောင်းရောက်သည်အထိ ပို့သကာ ဝိဇ္ဇာတန်ဆောင်းတွင် သမထ္ထ၊ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တို့ကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီး တနင်္လာဒေါင့်တွင် စေတီတော်မြတ်ကြီးအား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆံတော်များကို မျှော်မှန်းကြည်ညိုသဒ္ဓါပွားကာ ဦးချပြီးနောက် စေတီတော်မြတ်အား လင်္ကျာရစ်တပါတ် ပတ်ကာ အောင်မြေတွင်ဦးချ၍ မြောက်ဘက်မုဒ်မှ ပြန်လည်၍ ဆင်းလေ့ရှိသည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကုန်မှစ၍ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးအား သွားရောက်ဖူးမြော်၍ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်များ၊ မေတ္တာပွားများမှုများကို သွားရောက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရာတွင် . . . ကျွန်တော်၏ နောက်မှ မယောင်မလည်နှင့် ပါလာသော လူတချို့၊ ဝိဇ္ဇာတန်ဆောင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ရာ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား တစုံတဦးမှ ဆက်ကပ်ထားသော စားဖွယ်သောက်ဖွယ် သစ်သီးဝလံများအား လျင်မြန်စွာ သိမ်းကြုံး၍ ယူငင်သွားခြင်း၊ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ် ကျင့်ကြံရာ၌ ပွားများသော မြတ်စွာဘုရား၏ ဂုဏ်တော်များ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရာ၌ မည်သည့်ဆုများ တောင်းနေသနည်း။ မည်သည့်ဂုဏ်တော်များအား ရွတ်ဖတ်နေသနည်း ဟူ၍ ကျွန်တော်၏အနားတွင် ကပ်၍နားထောင်နေသော သူတချို့၊ အဓိဋ္ဌာန်စ၍ ၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် “ဆရာကြီး ဆရာကြီး နေရာကဖယ်ပေးပါတော့။ (အဘ) ဧည့်သည်တော်လာနေပြီ” ဟူ၍ တမျိုး၊ ကျွန်တော့်အား ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ကြသော လုံခြုံရေးများက တဖန်၊ အချို့သော ဘုရားဖူးများက ကျွန်တော်၏ အဓိဋ္ဌာန်ပြီးစီး၍ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရှစ်ခိုးကန်တော့အပြီးတွင် ကျွန်တော်၏ ဘေးမှလည်းကောင်း၊ ရှေ့မှလည်းကောင်း လာရောက်၍ ကျွန်တော့်အား လက်အုပ်ချီမိုးနေကြခြင်း စသည် စသည် တို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ယနေ့တိုင် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးနှင့် ဝေးကွာခဲ့ရပါတော့သည်။ ကုသိုလ်ယူ မေတ္တာပွားလို၍သွားကာမှ အကုသိုလ်တွေသာရခြင်းသည် မဖြစ်သင့်တော့ချေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ရန်ကုန်မြို့ မြို့လည်ခေါင်သို့ သွားရောက်သည့် အချိန်ကာလများတွင်သာ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးအား အဝေးမှ ဖူးမြော်ကန်တော့ခွင့်ရခဲ့တော့သည်။
လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိသော ကျွန်တော်တို့၏ မြတ်ဗုဒ္ဓ ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်အား မလွတ်လပ်စွာဖြင့် မဖူးမြော်လိုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်၏နေအိမ်ရှိ ဘုရားခန်းထဲမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ ဆင်းတုတော်နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ရှိ ဘုရားခန်းတွင်းမှ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ ရှေ့မှောက်တွင်သာ မိမိမေတ္တာပွားများမှုနှင့် သမထ္တ ဝိပဿနာ ကျင့်စဉ်များကို ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ ရပါတော့သည်။
၂.၆.၂၀၁၁ ခုနှစ် ကြာသပတေးနေ့သည် မင်္ဂလာရှိသော နေ့တနေ့ဖြစ်တော့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)ရှိရာ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ နံနက် ၁၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံလေ့လာ စကားပြောမည့်နေ့ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နံနက် မိုးလင်းလင်းခြင်း နာရေးကူညီမှုအသင်း သန့်ရှင်းမှု၊ လုံခြုံမှု စသည့် ကိစ္စရပ်များအား ညွန်ကြားနေစဉ် Townace Pick-up ကားအဖြူတစီး ဝင်လာသည်။ လူ ၅ ယောက်ခန့် ပါလာသည်။ သစ်သားဘောင် ၅ ပေ x ၄ ပေအရွယ်ကြီးတခုပါ ကားပေါ်မှချကာ လူတဦးက ကျွန်တော့်အား ဝမ်းသာဖက်လှဲနှင့် “ဦးကျော်သူရေ … အခုမှပဲ ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒ ပြီးမြောက်တော့တယ်” ဟု ပြောကာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
ထိုသူ၏ အမည်ကား “ဦးဝင်းတင်”။ ပန်းချီဆရာကြီး “ကျိုက်လတ်ဝင်းမောင်” ဖြစ်သည်။ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)ကို စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက ကျွန်တော့်အား ဂုဏ်ပြုလိုသည်မှာ ယခုမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ အသင်းသားတဦးဖြစ်သူ ပန်းချီဆရာ ဦးတင်ဦး အဆက်အသွယ်နှင့် ပြီးမြောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားကာ ပန်းချီဆရာကြီး ကျိုက်လတ်ဝင်းမောင်မှ သူ ရေးဆွဲထားသော ဆီဆေးပန်းချီကားကြီးအား ကျွန်တော့်အား ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်အဖြစ် ချီးမြှင့်သွားတော့သည်။ ထိုအချိန်ကာလ အပိုင်းအခြားအထိ ကျွန်တော်သည် အသင်းတွင် အလုပ်အလွန်များနေ၍လည်းကောင်း၊ ဧည့်သည်တော် ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် တွေ့ဆုံနေမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့သော ပန်းချီကားကြီးအား သေချာတိကျစွာ မလေ့လာ၊ မခံစားဖြစ်ခဲ့ပေ။ ဂျွန်မက်ကိန်း ပြန်သွားပြီးသည့်နောက် ပင်ပန်းမှုများအား အနားပေး၍ စိတ်ကိုလျော့ချလိုက်ကာ ကျွန်တော်၏ အခန်းတွင်းရှိ ကျွန်တော်၏ အလုပ်စားပွဲနံရံပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ပန်းချီကားကြီးအား အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနစ် မျှောသွားစဉ် ကျွန်တော်တို့၏ အသင်းသားတဦးဖြစ်သူ ကိုဝံသ (ပန်းချီဆရာကြီး ဦးသန်းအောင်၏ သား) ဖြစ်သူ၏ စကားသံကို ကြားလိုက်မိသည်။ “ပန်းချီလောကမှာ ပန်းချီ ကျိုက်လတ်ဝင်းမောင်ကို ရွှေတိဂုံဝင်းမောင် လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒီဆရာက မျက်စိမှိတ်ပြီး ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကို မကြည့်ဘဲ အလွတ်ရေးဆွဲနိုင်လောက်အောင်ကို တော်တယ်ဗျ” တဲ့။ ဟုတ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ရွှေတိဂုံဝင်းမောင် (ခ) ပန်းချီ ကျိုက်လတ်ဝင်းမောင်၏ ဆီဆေးလက်ရာ ပန်းချီကားမှာ အသက်ဝင်လှသည်။ ကျွန်တော်၏ အလုပ်ခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ခင်းထားသောကြွေပြားအခင်းပေါ်တွင်ထိုင်၍ ဖူးမြော်ကြည်ညိုမိပါက တကယ့်ကို ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ် ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှ ဖူးမြော်ရသလို ခံစားရပါတော့သည်။
ကိုဝံသပြောသွားသောစကားအရ “ဒီဆရာက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကို မကြည့်ဘဲ အလွတ်ဆွဲနိုင်တယ်” ဟူသော စကားရပ်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် များစွာတာသွားတော့သည်။ ဆရာတော် ဘုရားကြီးများ၏ ဆုံးမသြဝါဒများတွင်ပါရှိသော “နှလုံးသားမှာ ဘုရားတည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်” ဟု ပဲ့တင်သံများထပ်သွားပါတော့သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ကျိုက်လတ်ဝင်းမောင်မှာ နှလုံးသားတွင် ဘုရားတည်၍ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်မည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဖြစ်မည်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်တော့်အား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်လက်ဆောင်ပေးခဲ့သော ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ် ဆီဆေးပန်းချီကား၏ မြင်ကွင်းသည်ကား ကျွန်တော် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ပေါ်သို့ စတင်တက်ရောက်ရာလမ်း၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်မြတ်မှ ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့်မြူးခြင်းကို ကျွန်တော်ဖူးတွေ့မိသည့် ကျွန်တော်၏ အောင်မြေနေရာ၊ ကျွန်တော်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သည့် ဝိဇ္ဇာတန်ဆောင်း စသည့် ၃ ဋ္ဌာနဆုံဆည်းရာ အောင်မြေများပါရှိရာ ကျွန်တော့်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပန်းချီကားချပ်ကြီးပင်ဖြစ်တော့သည်။
လူသားအားလုံး နှလုံးသားတွင် ဘုရားတည်နိုင်ကြပါစေသတည်း။
Posted by oothandar on June 5, 2011 in Contemporary Experience, Kyaw Thu
← treasure of my life, poems from my heart – 20	Maung Lwan Ni – Sugar coated troubles (11) →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...